Kedu ihe na-eme na Imetụ mmụọ agba? - Magazin ADL ➡
Kedu ihe na-emetụ n'Ọnụ Mmụọ?
Gịnị Dị n'Ọgwụgwụ? Metụ Mmụọ Mmụọ na-ejedebe na ebe nkiri ebe Cole na Peter mechara gbakọta ọnụ n'agbanyeghị ọdịiche ha n'oge gara aga ma rụọ ọrụ ọnụ iji kpụọ na Cole totem iji gosipụta iwe ya: Mgbe Garvey sonyeere ụmụ nwoke ahụ, ọ legidere anya na osisi na ihe ha pịrị.
Mgbe ahụ, Gịnị ka mmụọ nsọ na-agba?
The Mmụọ Nsọ Buru'nsọpụrụ, ùgwù, na nganga.
N’ịtụle nke a, Gini n’eme n’isi 1 nke imetu mmụọ aka?
Chapter 1 kọwara ná mkpirikpi
Metụ Mmụọ Mmụọ malitere na onye omekome dị afọ 15 na-ejide aka n'ụgbọ mmiri na-eche ka a chụpụ ya otu afọ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Alaska. Ọ nọkwa na nsogbu ọzọ; maka ịpụnara ụlọ ahịa akụrụngwa, ịkwanye ya, na-etu ọnụ maka ya n'ụlọ akwụkwọ wee tie nwata ahụ ihe. Cole Mathews bụ aha ya.
34 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Gịnị bụ ozi onye edemede ahụ n’imetu mmụọ aka?
Ọnye na-bụ rosey in Touching Spirit Bear?
Kedu ihe bụ AT Oow na Inye Mmetụta Mmụọ?
Kedu ihe na-eme na njedebe nke Mmetụta Mmụọ Mmụọ?
Kedu ihe bụ ikpe ziri ezi gburugburu na-emetụ mmụọ?
Gịnị bụ anụ ọhịa bekee?
Ọnye na-bụ onye mgba mgba a na Inching Spirit Bear?
Kedu ihe na-eme n'isi 28 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Kedu ihe mere na isi 25 nke Mmetụta Mmụọ Mmụọ?
Gịnị ka mmụọ nsọ na-agba?
Kedu ihe Cole mụtara site na mmụọ nsọ?
Kedu ihe na-eme n'isi 18 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Isi ole dị na Mmetụta Mmụọ Mmụọ?
Kedu ihe nwa nza na-ese onyinyo na Inye Mmụọ Mmụọ?
Kedu ihe na-eme n'akwụkwọ Ntuziaka Mmụọ Mmụọ?
Kedu ka Cole si gbanwee na Mmetụta Mmụọ Mmụọ?
Kedu ihe Cole dị ka Na-emetụ Mmụọ Mmụọ?
Kedu ihe na-eme n'isi 21 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Kedu onye Cole na-arụ ụka na gburugburu?
Gịnị mere mmụọ ji agba ọcha?
Kedu ihe na-eme n'isi 27 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Kedu ihe na-eme n'isi 10 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Kedu ihe na-eme n'isi 14 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Kedu ihe na-eme n'isi 19 nke emetụ mmụọ mmụọ?
Kedu ihe njehie mbụ Cole mechara kweta?
Kedu ka Cole si ele ndị okenye na ikike na Inye Mmetụta Mmụọ?
Kedu ihe nwa nza na-anọchite anya Mmetụta Mmụọ Mmụọ?
Kedu aha ikpeazụ Pita na Metụ Mmụọ Nsọ?
Kedu ụfọdụ ọrụ mbụ Cole nwere iji mezue?
Isi isiokwu dị ka ime ihe ike, mgbanwe onwe onye, ​​na iche iche na-egosi na akwụkwọ akụkọ ahụ Metụ Mmụọ Mmụọ nke Ben Mikaelsen dere. Akụkọ a na-eso nwa okorobịa aha ya bụ Cole Matthews bụ onye nna ya na-eti ihe n'ụzọ anụ ahụ, nke mere na ọ na-akatọ ndị ọzọ.
Isi nke 13 ruo 15, p. 103-133
1. Ọnye na-bụ Rosey? Nọọsụ si Drake
2. Kedụ ihe ndị nọ na nro nke Cole kpọrọ ya? Baby chere ihu con
5. N'ihi gịnị ka Cole ji chee bea ahụ wakporo ya? ọ na-echebe onwe ya
7. Gịnị mere papa Cole mgbe ọ bụ nwata? ndị mụrụ ya tiri ya ihe
oow na Inye Mmetụta Mmụọ. Na. owee bụ ”acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ blanket” nke Garvey na-enye Cole. Garvey kwuru na akpọpụtara ya “dị ka akwa nhicha ahụ” n’enweghị L.
Gịnị dị na agwụcha? Metụ Mmụọ Mmụọ na-ejedebe na ebe nkiri ebe Cole na Peter mechara gbakọta ọnụ n'agbanyeghị ọdịiche ha n'oge gara aga ma rụọ ọrụ ọnụ iji kpụọ na Cole totem iji gosipụta iwe ya: Mgbe Garvey sonyeere ụmụ nwoke ahụ, ọ legidere anya na osisi na ihe ha pịrị.
Gburugburu ikpe ziri ezi bụ ụdị ndị America America ikpe ziri ezi sitere na Canada nke na-achọ ọgwụgwọ n'ụzọ dị iche na ụzọ ntaramahụhụ mgbe niile ma gosipụta ya n'akwụkwọ ọgụgụ "Metụ Mmụọ Mmụọ. "
The Agba akara dị mkpa dịka ọ na-anọchite anya onye nchebe ma gosipụta obi ike, ike anụ ahụ na idu ndú. -agba sie ike, dị gara gara, na-emekwa ngwa ngwa. Nwa ojii ibu na Grizzly yɛ amrado wɔ North America. Ihe nke Buru Akara bụ iji gosipụta akara ọma ma nye ikike.
Isi 5. Cole si bido ivu uzuoku ghasie, ma mgbe o leliri anya, ochoputa na o no nso n'agwaetiti ozo. Ọ ghọtara ya ndudue ozugbo: Ọ na-egwu mmiri megide ebili mmiri. Ọ malitela ịda mba, ya mere ọ maara na ya ga-alaghachi n'agwaetiti ahụ ka mmiri ghara iri ya ịnwụ.
In Chapter 25, Peter na ndị mụrụ ya gosipụtara n'àgwàetiti ahụ. Ndị nne na nna Peter nwere obi abụọ ma ewepụrụ Peter. Cole ji ụbọchị ahụ na-anwa ịkọwara ha etu ya siri gbanwee. Ọ na-akpọrọ ha gaa n’ebe e merụrụ ya ahụ́ ma ọ fọrọ obere ka ọ nwụọ.
181 Ọ mụtara nke ahụ chọrọ ịnọ akụkụ nke anụmanụ a n'uche ya: dị ike, dị mpako, na-ahụkwa ihe niile dị na ndụ n'ụzọ dị iche na ebe dị anya. pg. 186 Ọ mụtara na anụmanụ a na-enwe ndidi, na-adịgide adịgide, ma nwee amamihe, dịkwa ike.
In Isi 18 nke Na-emetụ Mmụọ Mmụọ, Cole na-amalite iwu ụlọ ya n'okpuru nduzi nke Garvey na Edwin. Cole na-ewe iwe na ndị ikom ahụ agaghị enyere ya aka iwulite, mana ha na-agwa ya naanị na ọ bụ ọrụ ya.
The umu nnunu bụ ihe nnọchianya nke ịhụnanya na mmetụta ịhụnanya Cole nwere agụụ siri ike mana ọ naghị ekwe ka ndụ ya dịrị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-enwere ha ọmịiko ka ha dinara n'ebe ahụ gbajiri dị ka ọ dị. Nke a bụ ọchịchọ mbụ Cole na ọ nwere ike ilekọta ihe ọzọ na-abụghị onwe ya, ọ nwere ike ịbụ ikike maka ezi ihe.
Ihe Ọmụmụ nke Summary
A chụpụrụ Cole Matthews gaa n'àgwàetiti dị n'ụsọ oké osimiri nke Alaska dị ka akụkụ nke Circle Justice, ọzọ na nga mgbe ọ wakporo Peter Driscal. Nleta mbụ ya na agwaetiti ahụ kwụsịrị na mgbapụ mgbapụ enweghị isi. Mgbe agha ya na Mmụọ Mmụọ azụ azụ, Cole merụrụ ahụ nke ukwuu.
Cole gbanwere ọtụtụ n'ime “Metụ Mmụọ Mmụọ. ” Ọ na-amalite dị ka nwata nwoke iwe na-achọ ịchịkwa. Ọ na-ata onye ọ bụla ụta maka mmejọ ya. Ọ bụ bọmbụ na-aga ije nke iwe, na-akụ onye ọ gburu Peter ọbara. Ke ini enye okosobode mme utịp esie utu ke ndinyịme ke imọ ikanam ndudue, enye ama obiom Peter.
Akwụkwọ ọgụgụ Metụ Mmụọ Mmụọ akọwa agwa ya, Cole Matthews, dị ka ”onye aka ya dị ọcha--achọ, dị afọ iri na ise si Minneapolis na-enwe nsogbu ọkara ndụ ya. ”Akwụkwọ akụkọ ahụ sochiri Cole ka ọ na-agbanwe mgbanwe onwe ya mgbe a manyere ya ibi naanị ya na agwaetiti dị na Alaska.
In Isi 21 nke Na-emetụ Mmụọ Mmụọ, anyị ga-ahụ otu esi nwalee Cole. Ọnwụnwa na ọnwụnwa chere ya ihu bụ nke ọ na-emeri nke ọma. Ọ na-aga ịgwọ ọrịa. Ọ nweela ọganihu kemgbe oge ikpeazụ ọ nọ n'àgwàetiti a.
Isi nke 6-8, p. 47-73, Ajụjụ Ndị E Ji Amụ Ihe
1. Kedu onye Cole na-arụ ụka na Circle? nna ya
3. Olee ihe Pita chere ga-eme ka ihe dị mma? na-akụda isi Cole
4. Olee mgbe ebili mmiri ga-abata? n'etiti ehihie
5. Kedu onye Cole na-ata ụta maka nchụpụ ya na agwaetiti ahụ? garvey
As Chapter 12 emepe, Cole dinara ala n’enweghi enyemaka n’aka aka ya, ogwe aka ya, ọgịrịga ya na agbajikwa Mmụọ Mmụọ abịakwute ya. Ọ kwenyesiri ike na nnukwu anụ ga-egbu ya, ọ na-atụ anya na ọ ga-adị ngwa. Kama, ibu na-agbaji Cole na ya dị ka ngosipụta ikpeazụ nke nnupụisi, na-agbanye gburugburu, na epupụta.
In Isi nke 27 nke imetu mmụọ mmụọ, Mmekọrịta Peter na Cole malitere ịgbanwe. Peter na-ekwe ka Cole hie n'ime ụlọ ahụ, mana ọ ga-ahụ na ọ ga-ata ya ahụhụ site na ịhapụ ọnụ ụzọ meghere na enweghị nsọpụrụ ihe ya. Peter mekwara ka o doo anya mgbe o kwuru hoo haa na nke a apụtaghị na ha bụ ndị enyi.
In Isi nke 10 nke imetu mmụọ mmụọ Cole ka na-arapara mgbe ịlụ ọgụ a ibu. O merụrụ ahụ ma ghara ibili. Okwesiri ikpochapu ma mee nke a, mana o nweghi ike isi na ya pụọ. Anwụnta wakporo ya na ụmụ nnụnụ ọ hụrụ na mbụ anwụọla n’ala dị nso.
Anyị amụtala banyere ihe ndị mere na Chapter 28, ikpeazụ isi of Metụ Mmụọ Mmụọ. Na nke a isi, Peter mara ọkwa na ya na Cole ga-eme ọdọ mmiri ememe ụtụtụ sook naanị ọnụ. Mgbe ha ruru ọdọ mmiri ahụ, Cole kwuru na oge eruola ka ha bụrụ enyi, mana Peter ji iwe gwa ya na ha agaghị abụ ndị enyi.
In Isi 14 nke Na-emetụ Mmụọ Mmụọ, Cole laghachiri n'ụlọ ọgwụ. Ọ na-agwọkarị mmerụ ya ma ọ dị mkpa ugbu a ihu Circle iji chọpụta ma ọ ga-aga n'ihu na Circle ma ọ bụ gaa n'ụlọ mkpọrọ. Mama Cole na Garvey kwadoro usoro a dum.
Ọ bụ naanị ụbọchị abụọ, mana na Chapter 19 nke ”Metụ Mmụọ MmụọCole na-eriju afọ na mmiri ịsa ahụ na ice oyi, na-eburu nkume n'elu ugwu, na ịbụ 'ohu' Edwin na Garvey. Mana mgbe ọ kwupụtara afọ ojuju ya na ịjụ ime nri abalị ha gwara ya na n'ụtụtụ na ọ ga-alaghachi na Minneapolis.
n'ihi na mbụ oge, Cole kwetara na o mere a ndudue. Gịnị bụ ihe a ndudue? O chefuru banyere ọbịbịa mmiri na-abata mgbe ọ gbalịrị igwu mmiri n'àgwàetiti ahụ.
Kedu ka Cole si ele ndị okenye na ikike anya? Cole owụt unana ukpono ndị okenye, dị ka mgbe ọ na-purposely spits otú ọ ga-kụrụ Edwin, ekwere na ndị okenye kwesiri ka enyere ya aka inyefe ya ndi ozo, ma kwenye na o nwere ike inweta ohere ikpeazu ozo (5-6).
Peter bụ nwa okorobịa dị afọ iri na ise nke etigburu onwe ya Cole. ebe ọ bụ na Cole gara ịkụwa isi ya ugboro ugboro n'akụkụ ụzọ ahụ, mmerụ ahụ nke Pita emeela ka ọ nwee nsogbu ikwu okwu na nrọ ọhụụ. Ọ bụ onye ihere, onye dị jụụ, na-atụ ụjọ ọnụnọ Cole mgbe oge ahụ gachara.
akwụkwọ na akwụkwọ, ntụrụndụ na mmasị, paranormal phenomena, akwụkwọ ndị okenye
Ọ bụ 100 mcg ka 1000 mg?
Kedu olu bụ ájá ijeri 1 ijeri?